Matarenda evechidiki osimudzirwa
You are at:Home»Ngoma Nehosho»Matarenda evechidiki osimudzirwa
By Munyori weKwayedza on	 February 23, 2018 · Ngoma Nehosho
SANGANO rakazvimirira reHard Mashona Arts and Culture Trust roshanda pamwe chete nevaimbi vemisambo yakasiyana mukusimudzira matarenda evechidiki munyaya dzemimhanzi pamwe neutano hwavo. Muhurukuro nemukuru wesangano iri, Andrew Musoni, anoti vakaona zvakakosha kuti vasimudzire vechidiki vane zvipo zvekuimba uyewo nekuvandudza utano hwavo.
“Tichange happy wheels tichiita mashoo nevaimbi vakasiyana vanosanganisira vechitendero neveZim-dancehall tichitsvaga mari yekuvandudza hupenyu hwevechidiki vane zvirwere zvinoda kunovhiiwa kunze kunyika dzakaita seIndia,” anodaro.
Anoenderera mberi achiti, “Mukana uyu tichaupa zvakare vechidiki avo vane matarenda ekuimba patichange tichifamba mapurovhinzi ese tichitenderera Zimbabwe. Donzvo redu nderekusimudzira vechidiki vane matarenda ekuimba nekunyora nziyo.”
Anoti zvinorwadza kuona kuti kune vamwe vechidiki vane zvipo zvinokwanisa kuti vawane raramo muhupenyu hwavo asi vari kushaya rutsigiro ruzere.
“Kune vechidiki vane matarenda ezvekuimba vari kushaya zvakare vari kuvabatsira zvinova zvinoita kuti vamwe vacho vazowanikwe vave kuputa nekunwa zvinodhaka,” anodaro Musoni.
Handisati ndapera: Mukwamba